Shirka Agaasime yaasha oo uu shir gudoominayay Agaasimaha Guud wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha C/casiis Ibraahim Aadan ayaa maanta ka dhacay hawlka shirarka ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. – MOCI
Shirka Agaasime yaasha oo uu shir gudoominayay Agaasimaha Guud wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha C/casiis Ibraahim Aadan ayaa maanta ka dhacay hawlka shirarka ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha.
Shirkaan oo dhaca talaado walba oo looga hadlo shaqooyinka waaxyaha wixii kaqabsoomay iyo kuwa gacanta lagu hayo.
Shirka maanta oo ay fadhiyeen Agaasime Guud Agaasime Waaxyo iyo Kusimeyaal agaasime.
Waxaa lagu soo bandhigay shir wasaaradda ay uga qayb gashay wasaaradda dalka kenya shirkaas oo ay qaban qaabisay ururka (COMESA) 2—6 septembar 2019.waxaa wasaaradda uga qayb galay Agaasimaha Maalgashiga Axmad Maxamed Isaaq. Iyo Madaxa xisaabaadka Abdulahi Ali Adow.
Ujeeda shirka waxay ahayd Cilmi baaris iyo soo bandhigidda wax yaabo cusub.